Emma Theofilus,23 taona: Minisitra zandriny indrindra eran-tany
Ny tanora no ho avin'ny firenena ary manome sehatra azy ireo ny ao Namibia. Porofon’izany ny nahalany an'i Emma Theofilus, tovovavy vao
23 taona monja ho eo amin'ny toerana ambony ao amin'ny fireneny. Ny 24 martsa lasa teo mantsy izy no lany ho minisitra lefitry ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana na "vice-ministre de la technologie de l'information et de la communication". Ny filoha namibiana no nisafidy azy, tamin'ireo kandida niisa 8 niaraka taminy. I Emma Theofilus izany izao no vehivavy kely indrindra mitana anjara toerana ambony ao amin'ny governemanta manerana izao tontolo izao.